Prof. Maxamed Cabdi Gaandi oo looga guuleystay Tartanka Xubinimada Aqalka sare – STAR FM SOMALIA
Prof. Maxamed Cabdi Gaandi oo looga guuleystay Tartanka Xubinimada Aqalka sare
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya .Prof aMaxmed Cabdi Gaandi ayaa waayay xubinimada Kuraasta Aqalka sare ee Jubbaland, kaddib markii looga guuleystay tartanka doorashada Kursiga Aqalka sare ee ka socota magaalada Kismaayo.
Axmed Xaashi Maxamed ayaa ku soo baxay xubinimada Aqalka sare, iyadoo uu noqday xubintii labaad ee ku guuleysta doorashada Aqalka sare u matalaya Maamulka Jubbaland.
Prof. Gaandi ayaa ku fashilmay inuu kalsooni ka helo Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland, kaddib markii Musharaxa kale ee la tartamayay Axmed Xaashi Maxamed ay u codeeyeen, isagoo helay codod dhan 40 cod, halka Prof. Gaandi uu helay 26 cod.
Xildhibaankii u horeeyay ee Aqalka sare u matalaya Jubbaland ayaa waxaa ku guuleystay Xasan Faarax Xujaale, oo si lama filaan ah uga adkaaday Siyaasiga Cabdi Maxamed Tarax oo Wasiir ka soo noqday dowladdii C/llaahi Yuusuf.
Waxaa wali socota doorashada Musharaxiinta xubnaha Aqalka sare ee Baarlamaanka, waxaana Jubbaland laga sugayaa 8 xubnood inuu u matalo Aqalka sare ee Baarlamaanka dowladda Federaalka.
Aqalka sare ee Baarlamaanka oo ah mid ku cusub siyaasada Soomaaliya ayaa ka kooban 54 xubnood oo matalaad ku leeyihiin Maamul goboleedyada, waxaana ay qeyb ka noqon doonaan Xildhibaanada dooranaya Madaxda dowladda.
Cabdikaafi Macalin Xasan oo ku guuleystay Kursigii u horeeyay ee Aqalka sare K/Galbeed
Baarlamaanka Puntland oo bilaabay dhageysiga Khudbadaha Musharaxiinta Aqalka sare (Daawo Sawiro)